I-CASA DINIS - I-CASA GRANDE - AMANZI E-PORTOBELO - I-Airbnb
I-CASA DINIS - I-CASA GRANDE - AMANZI E-PORTOBELO
Indlu yonke sinombuki zindwendwe onguRui
URui unezimvo eziyi-80 zezinye iindawo.
Zinxulumanise ezi kwiCaribbean! Wamkelekile ePortobelo! Kulo mlando we-Humanity Heritage pueblo unethuba lokuphila amava okwenene kwaye wabelane nge-pueblo egcwele imbali, isazisi kunye nabantu abahle! Nge-placer ndabelana ngeLa Casa Dinis ukuba ukonwabele utyelelo lwakho ePortobelo. Ngaba yindlu enesazisi sendawo kunye nesitayela saseYurophu, le projekthi ihambelana kancinci kancinci kwaye nothando oluwela kwi-bay exabisekileyo yasePortobelo nakwintliziyo ye-pueblo.
I-Casa Dinis kukwakhiwa kwakhona kwendlu yekoloniyali eCasco Viejo yasePortobelo, ipropati iphakathi kwe-pueblo kwaye yindawo ekhethekileyo, ebanzi kwaye eqaqambileyo.
Indlu imigangatho-3: on inxalenye ephantsi nomnyango ezizimeleyo kwigumbi lokuhlambela kunye istudiyo kunye lokuhlambela nekhitshi, malunga nesicwangciso esentabeni nto leyo kabini ezintathu amagumbi, amagumbi, ikhitshi, masimu kunye nembono Hermosa of Portobelo: USelva, uMar y Pueblo!
E Portobelo Podrán, imisebenzi ezininzi: iilwandle iparadesi, uSnorkel, Kayak, uhambo isikhephe, uKhenketho (ehla), ehla, yokupheka, utyelelo kwi ezikhumbuzo Patrimonio de la Humanidad - Fuertes, Customs, iglesia del Cristo Negro ... es obligatorio ukuba bazi ubutyebi benkcubeko ye-Afro kule pueblo ebizwa ngokuba yiCongo kwaye yamiselwa ngonyaka we-2018 iLifa leMveli loBuntu.
Wamkelekile eCasa Dinis!
Umbuki zindwendwe ngu- Rui
Ndisebenza kwaye ndihlala ePortobelo. Ndizinikezele nge-100% kwiSikolo seRhythm kwaye ndineentsuku ezininzi ezisebenzayo, kodwa ndihlala ndikhona xa uyidinga, ndiguquguquka kakhulu ukukunceda kwaye uyinxalenye yobubele bam bokukukhonza, ngoko kuya kuhlala kunjalo. ekhoyo.
Ndisebenza kwaye ndihlala ePortobelo. Ndizinikezele nge-100% kwiSikolo seRhythm kwaye ndineentsuku ezininzi ezisebenzayo, kodwa ndihlala ndikhona xa uyidinga, ndiguquguquka kakhulu…
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Portobelo